यस कारण देखा पर्छ महिलामा यौनांग चिलाउने रोग, यस्तो छ कारण र समाधान
बुधबार, साउन २०, २०७८ ०२:२१:१७ युनिकोड
शुक्रबार, असार १८, २०७८ जनता नेपाल
कतिपय महिलामा यौनांग चिलाउने समस्या हुन्छ । कहिलेकाहीं यसरी यौनांग चिलाउनुलाई सामान्य मानिए पनि लामो समयसम्म समस्या कायम रहे त्यो दीर्घ रोगको कारण हुन सक्छ । महिला यौनांग धेरै कारणले चिलाउन सक्छ । तीमध्ये प्रमुख कारण योनि राम्रोसँग सफा नहुनु हो । त्यसबाहेक जथाभावी यौनसम्पर्क राख्दा पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ ।
कतिपय महिलामा अनावश्यक तनावका कारणले पनि यौनांग चिलाउँछ ।
केही अप्राकृतिक वा प्राकृतिक तत्त्वको संक्रमणका कारणले पनि यौनांग चिलाउँछ । यस्तो अवस्थामा योनिको वरिपरि सेतो दहि जस्तो ढुसी जम्मा हुन्छ ।
जथाभावी यौनसम्पर्क राख्दा यौनांग रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ । यस्तो अवस्थामा अरूलाई भन्दा पनि मधुमेहबाट पीडित महिलाहरूमा संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ ।
यौनांग छाला सुक्खा भएको अवस्थामा पनि यौनांग चिलाउँछ । त्यसैले यौनांग वरिपरिको छालालाई सुख्खा हुन दिनु हुँदैन ।
संक्रमण, चोटपटक, महिनावारी बन्द हुनुजस्ता कारणले पनि यस्तो समस्या देखा पर्न सक्छ ।
सबैभन्दा पहिले समस्याको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ ।
कुनै रसायनिक पदार्थ (पफ्र्युम)को प्रयोगका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो भने त्यस्तो पफ्र्युमको प्रयोग बन्द गर्नुपर्छ ।
कतिपयलाई बाथटब वा स्वीमिङपुलमा नुहाउँदा पनि यौनांग चिलाउने समस्या देखा पर्न सक्छ । त्यसैले सकेसम्म बाथटब वा स्वीमिङपुलमा नुहाउनु हुँदैन ।
सुतीको अन्तर्वस्त्र प्रयोग गर्नुपर्छ । राति सुत्दा सकेसम्म अन्तर्वस्त्र प्रयोग गर्नुहुँदैन ।
समस्या समाधान नभएसम्म शारीरिक सम्पर्कबाट टाढै रहनुपर्छ ।
महिनावारी भएका बेला के गर्ने ?
ताजा फलफूल बढी खानुहोस् । यसमा भएको भिटामिन ‘सी’ र ‘ए’ ले योनिमार्गलाई स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । साथै प्राकृतिक रेशाहरूले आन्द्राको चाल पनि राम्रो गर्ने भएकाले फलफुल नियमित खानुपर्छ ।
दैनिक ८ देखि १० ग्लास अर्थात् ४ लिटरभन्दा बढी पानी पिउनुहोस् । यस्तो अवस्थामा मद्यपानले यिष्टको वृद्धि गराउने भएकाले मदिरालगायत चिया, कफी पनि कम सेवन गर्नुहोस् ।
धेरै गुलियो खानेकुरा तथा दुधबाट बनेका परिकारले योनिमार्गका जीवाणुको वृद्धिमा मद्दत गर्छन्, त्यसैले यस्ता खानेकुरा कम खानुपर्छ ।
सरसफाइमा सजग हुनुहोस् । सधै आफ्नो यौनाङ्ग सफा राख्नुहोस्, तर धेरै पखाल्ने काम नगर्नुहोस् ।
सधैं अगाडिबाट (योनिमार्गतिरबाट) पछाडि (मलद्वारतिर) पखाल्नुहोस् । यसले मलद्वारमा भएको जीवाणुलाई योनिमार्गमा तथा पिसाब नलीमा जानबाट रोक्छ ।
योनिमार्ग सफा गर्न महङ्गो अनि बास्नादार साबुन वा सेम्पु नै चाहिँदैन । सामान्य साबुन वा कम क्षार भएका भजाइनल वासले पनि राम्रो सफाई गर्न सकिन्छ ।
सुगन्धयुक्त प्याड तथा योनिमार्गको छेउछाउमा पाउडर प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन ।
पीडा कम गर्न हट रबर ब्यागको प्रयोग वा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम दुखाइ कम गर्ने औषधि सेवन गर्न सकिन्छ ।
धेरै रगत गए वा धेरै दिन सम्म रगत गए चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार १८, २०७८, २२:००:३४
शरीरमा भिटामिन डीको कमी हुँदा देखिने ५ संकेत यस्ता छन्
यस कारण दोहोर्‍याएर यौन सम्बन्ध राख्न मन लाग्छ
ग्याष्ट्रिक के कारणले हुन्छ ? यसको लक्षणहरु,कारण र व्यवस्थापन गर्ने उपाय
मुटु रोगका यी मुख्य १२ प्रमुख लक्षणहरू थाहा पाउनुहोस!
के हो डेंगु ?: डेंगुका लक्षण, संकेत र उपचार बारे जान्नैपर्ने कुरा
सोमबार, असार २१, २०७८ जनता नेपाल
वर्षायाममा नेपाल–भारतका तराई क्षेत्रमा महामारीकै रूपमा फैलने डेंगु प्रदूषित पानीका कारण लाग्ने रोग हो । यो रोग एडेस एजिप्टि नामक पोथी लामखुट्टेमार्फत फैलन्छ । यो लामखुट्टेले प्रायः दिउँसो मानिसलाई टोक्छ । सामान्य ज्वरो र डेंगुका कारणले आउने ज्वरोलाई त्यतिकै छुट्याउन सकिंदैन । डेंगु एक प्रकारको सरुवा रोग हो र यो रोग कुनै पनि उमेर समूहका मानिसमा देखा पर्न सक्छ । सामान्यतया यो रोगको लक्षण लामखुट्टेले टोकेको ४ देखि ७ दिनमा देखा पर्छ । पुरा पढ्नुहोस्
वर्षायामका पानीजन्य रोगहरुबाट बच्ने १० तरिका
वर्षायामको सुरुवातसँगै विभिन्न किसिमका रोगको प्रकोप बढ्छ। विशेषगरी विभिन्न खाना, पानी तथा कीटजन्य रोगहरू प्रमुख कारण हुने गर्दछन्। यस्ता रोगहरूको प्रकोप बढ्नुको पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन्। यस समयमा गर्मी तथा अरु प्रतिकूल अवस्थाका कारणले भण्डारण गरिएका बासी खानेकुरामा विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाको बृद्धि हुन्छ र तिनीहरूले निकालेको टक्सिनको कारण फुड पोइजनिङ हुन सक्दछ। वर्षायाम सँगै झिंगा माखाको विकास तथा संख्या बढ्न थाल्दछ। यिनीहरू विभिन्न किसिमका फोहर मलमूत्रमा बस्ने र मानिसहरुले खाना बनाउँदा, खाना खान तयार पारिएको खाना तथा पानीमा आएर बस्दा रोगका किटाणु खानामा सारिदिन्छन् र खाना तथा पानी दुषित बनाइदिन्छन्। उक्त खाना पानीको सेवनले झाडा, बान्ता, ज्वँरो, जन्डिसजन्य रोग लाग्ने गर्दछ। पुरा पढ्नुहोस्